Akụkọ gbasara ụlọ akwụkwọ Samo
Dị ka ọ dị n'ahịa ọ bụla na-erute afọ, crypto ahụla n'oge na-adịbeghị anya mgbawa na ngwaahịa ntinye ego ọhụrụ maka ndị sonyere n'ahịa
Chekwaa Crypto gị: iburu obere akpa ngwaike
Crypto nwere ike ịbụ ihe na-atọ ụtọ ma na-atọ ụtọ, mana nchekwa kwesịrị ịdị na-ebute ụzọ mgbe niile! Mụta ihe mere ị ga-eji chekwaa crypto gị na obere akpa ngwaike yana otu o si arụ ọrụ.
Pọdkastị Alpha Dog
Ala DeFi ($DFL)
DeFi Land bụ egwuregwu ịme anwansị nke ọtụtụ agbụ ọrụ ugbo emebere iji mejupụta ego enweghị ego.
Solend bụ usoro algọridim, gbasapụrụ agbazinye maka ịgbazinye ego na ịgbazinye ego na Solana. Chee echiche Aave ma ọ bụ Compound na Solana.
Orca bụ mgbanwe cryptocurrency kachasị mfe, ngwa ngwa na nke enyi na enyi na Solana blockchain.
Nzọụkwụ ego ($STEP)
Ego nzọụkwụ bụ ikpo okwu nhụta pọtụfoliyo nke na-achịkọta LP niile, tokens, ugbo na ọkwá onye ọrụ nwere ike jikọọ na obere akpa ha wee gosipụta ya na dashboard enweghị nkebi.
Ego obi ($CHEST)
Agwaetiti Treasure abụghị naanị egwuregwu, mana usoro gburugburu ebe obibi DeFi dum, site na igbe ngwaahịa a haziri ahazi, ruo DEX, ruo n'ugbo mmiri, na ndị kansụl ọchịchị, gbadoro ụkwụ na ike yana NFT na egwuregwu na-akpali akpali na $CHEST.